Published: Jul 04 Posted Under: Ministry News
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ သစ်ပင်စိုက်ပွဲ ကျင်းပသည့်သတင်း
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ သစ်ပင်စိုက်ပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၂၇) တာပိတ်ဆည်ပတ်လည်နှင့် ရုံးအမှတ် (၆) ရှေ့မျက်နှာစာတို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းတွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှု အောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ခွဲရုံ၊ လိုင်းရုံး၊ စီမံကိန်းရုံး စသည့်နေရာ များတွင် ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက်၊ မဟော်ဂနီ စသည့် ရတနာတန်းဝင်ပင်များ၊ သရက်၊ မာလကာ၊ သြဇာ စသည့် စားပင်၊ သီးပင်များ၊
Published: Jun 27 Posted Under: Ministry News
လျှပ်စစ်မီးမရရှိသောဒေသနေ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို "နေလို လလို" တောင့်တလျက်ရှိကြသည်…… လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိပြီးသော ပြည်သူတွေကတော့ ရရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဗို့အားပြည့်ပြည့် ရချင်တယ်…. ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု မဖြစ်ချင်ကြဘူး…. ၎င်းလိုအပ်ချက် ၂ခုကို နိုင်ငံတော်က ဘဏ္ဍာငွေ အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့… ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်…
ရက် (၁၀၀) စီမံချက်အရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၅၀ မဂ္ဂါဝပ် တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဖလမ်းဒေသ၊ တောင်ကုတ် - မအီ ဒေသတို့တွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းခြင်း
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့အတွက် ရက်(၁၀၀)စီမံချက်အရ ရက် (၄၀)ကျော် ကာလအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းအပိုင်းတွင် မော်လမြိုင်စွန့်ပစ်အပူသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လျာထား (၃၀) မဂ္ဂါဝပ်ထဲမှ (၂၀) မဂ္ဂါဝပ်အား ၁-၆-၂၀၁၆ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ မြင်းခြံသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ (၁၃၀) မဂ္ဂါဝပ်ကို ၁၅-၆-၂၀၁၆ ရက်တွင် လည်းကောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်၍ မဟာဓာတ်အားစနစ်သို့ ပို့လွှတ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
Published: Jun 14 Posted Under: Ministry News
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဖေဇင်ထွန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးသည့်သတင်း
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဖေဇင်ထွန်း သည် ၁၁-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် သစ်တောစွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးဟန်ထွန်း၊ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှအောင်၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရက်(၁၀၀)စီမံချက် အတွင်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ၏ BRT ယာဉ်(၆၅)စီးကို CNG ဖြန့်ဖြူးပြီးစီးရေး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
Published: Jun 08 Posted Under: Ministry News
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် / ဖြန့်ဖြူးမှုအခြေအနေများ၊ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းကျဆင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်သည့်သတင်း
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ် / ဖြန့်ဖြူးမှုအခြေအနေများ၊ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုလျော့နည်းကျဆင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၃:၀၀) နာရီတွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ ရတနာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Published: Jun 06 Posted Under: Ministry News
ဓာတ်အားစနစ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု (System Break) ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း……… မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်အားစနစ်၏ အားနည်းချက်များ ပြုပြင်ရန် အချက်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ရာ….. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ၎င်းနေ့ညနေပိုင်းတွင်... ဓာတ်အားစနစ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု( System Break) ဖြစ်ရပြန်ပါသည်…..
Published: Jun 03 Posted Under: Ministry News
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတိုင်မီကာလက ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၆၉၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၁၂% သာရှိပြီး ဓာတ်အား လုံလောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် မြို့၊ ကျေးရွာများ ဓာတ်အားတိုးချဲ့ပေးနိုင်မှု တိုးတက်မှု နည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်များဖြစ်သည့် ရွှေလီ၊ ရဲရွာ စက်ရုံများ လည်ပတ်ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးအတွက် အခြေခံကျသော ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများကို ဦးစွာတည်ဆောက်ရပါသည်။
Published: Jun 02 Posted Under: Ministry News
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရန်ကုန်၊သထုံ၊မော်လမြိုင်မြို့တို့ရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးနှင့် စွန့်ပစ်အပူသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ အမှတ်၂ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်စက်ရုံ(ညောင်တုန်း)၊ ညောင်တုန်းရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေ၊ အမှတ်၅ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(ကန်ကြီးထောင့်)တို့အား ကြည့်ရှု
နိုင်ငံတော်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် အရှိန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စုစုပေါင်းစက်တပ်ဆင်အင်အား (၃၆၀) မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ရွာမသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးနှင့်စွန့်ပစ်အပူသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဖေဇင်ထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများအဖွဲ့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ(၂၇)ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းတွင် မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းကြောင့် သန်လျင်တစ်ဝိုက် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုသတင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းတွင် (၂၀-၅-၂၀၁၆)ရက် နေ့လည်(၁၃:၀၃)နာရီခန့်တွင် မိုးသက်လေပြင်း တိုက်ခတ်ပြီး သံလျင် ၂၃၀ ကေဗွီ မဟာဓာတ်အားခွဲရုံမှ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးသည့် ကြယ်စင်အိမ်ရာ ၃၃ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း မိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရပါသည်။
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းအတွက် ထရန်စဖော်မာများဝယ်ယူရန် တင်ဒါ ခေါ်ယူမည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့်သတင်း
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းအတွက် ထရန်စဖော်မာများဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူမည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၉) ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီတွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်း အဝေးခန်းမ (၁) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။